မိန်းကလေးအဝတ်အစား XN-8061 သတ်မှတ်ပေးသည်
စတိုင်နံပါတ် .: XN-8061 အရောင်: အနီရောင်အရွယ်အစား: 1-5A အထည်: ၁၀၀% polyester ချည်ထည်သည်နှစ်ဖက်စလုံးကိုနှစ်ဖက်စလုံးကိုပျော့ပျောင်းသော handfeel ဖြင့်အသုံးပြုသည်။ , Patch ပန်း, Sequin ပန်း
မိန်းကလေးအဝတ်အစား XC-XN504 သတ်မှတ်သည်
စတိုင်နံပါတ် .: XC-XN504 အရောင်: ပန်းရောင်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: ၁၀၀% polyester ချည်ထည်သည်နှစ်ဖက်စလုံးကိုနှစ်ဖက်စလုံးကိုပျော့ပျောင်းသောလက်ဖြင့်ကိုင်သည်။ ပန်း
မိန်းကလေးအဝတ်အစား XC-XN501 သတ်မှတ်သည်
စတိုင်နံပါတ် .: XC-XN501 အရောင်: ရေတပ်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: ၁၀၀% polyester ချည်ထည်သည်နှစ်ဖက်စလုံးကိုစူပါပျော့ပျောင်းသောလက်ဖြင့်ကိုင်ထားသည်။
မိန်းကလေးအဝတ်အစား WP-3038 သတ်မှတ်
မိန်းကလေးအဝတ်အစား WP20-119 သတ်မှတ်သည်
စတိုင်နံပါတ် .: WP20-119 အရောင်: မီးခိုးရောင် Melange အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: ၁၀၀% ဝါဂွမ်း၊ ၂၈၈ gsm ဆက်စပ်ပစ္စည်း: elastic tape, elastic မှတ်ချက်။ ။ နေရာချထားပုံနှိပ်ခြင်း၊
မိန်းကလေး၏ 3pcs စုံ (ဂျက်ကက် + တီရှပ် L / S + စကတ်) WP20-018
စတိုင်နံပါတ် .: WP20-018 အရောင်: အနက်ရောင် / အဖြူရောင်အရွယ်အစားအရွယ်အစား: 4-12A အထည်: ဂျက်ကက်: Shell: PU, နံရံ - 210T taffeta; တီရှပ် - ဝါဂွမ်း ၉၅% ဝါဂွမ်း ၅% spandex တစ်ခုတည်းဂျာစီ၊ 200 gsm; စကတ်: ကိုယ်ထည်: 100% polyester interlock, 200gsm, နံရံ: 210T taffeta ဆက်စပ်ပစ္စည်း: သတ္တုဇစ်, elastic မှတ်ချက်: သံမဏိ rhinestone, Patch ပန်းထိုး, Sequin ပန်း။
မိန်းကလေးအဝတ်အစား LY20-097 သတ်မှတ်သည်
စတိုင်နံပါတ် .: LY20-097 အရောင်: ပန်းရောင် / မီးခိုးရောင်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: ၁၀၀% ဝါဂွမ်း၊ ၂၈၈ gsm ဆက်စပ်ပစ္စည်း: elastic tape, perl, elastic မှတ်ချက်။ ။
မိန်းကလေးအဝတ်အစား LY20-088 သတ်မှတ်သည်
စတိုင်နံပါတ် .: LY20-088 အရောင်: ပန်းရောင် / မီးခိုးရောင်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: ၁၀၀% ဝါဂွမ်း၊ ၂၈၈ gsm ဆက်စပ်ပစ္စည်း: Herringbone တိပ်၊ ပလတ်စတစ်ဇစ်ပြား၊ elastic မှတ်ချက်။
မိန်းကလေးအဝတ်အစား LY20-087 သတ်မှတ်သည်
စတိုင်နံပါတ် LY20-087 အရောင်: ပန်းရောင် / မီးခိုးရောင်မဲရင့်ရောင်အရွယ်အစားအရွယ်အစား: 4-12A အထည်: နောက်ဖက်တွင် 100% ချည်သားမွေး, 340gsm အသုံးအဆောင်: ငွေရောင်တိပ်၊ ပလတ်စတစ်ဇစ်ပြား၊ elastic မှတ်ချက် - နေရာချထားသောပုံနှိပ်ခြင်း၊ ဘောလုံးကို, အလှဆင်လေးကို
မိန်းကလေးအဝတ်အစား LY20-086 သတ်မှတ်သည်
စတိုင်နံပါတ် .: LY20-086 အရောင်: ပန်းရောင်အရွယ်အစားအကွာအဝေး - ၄-၁၂ အေအထည် - နောက်ဖက်တွင် 100% ချည်သားမွေး, 340gsm ဆက်စပ်ပစ္စည်း - elastic tape, sequin တိပ်မှတ်ချက်များမှတ်ချက် - သံမဏိကြမ်းတမ်းသောကျောက်ထည်၊ နေရာချထားပုံနှိပ်ခြင်း၊ sequin ပါသော Iron Patch ပန်းထိုး။
faux သားရေဂျာကင်အင်္ကျီ၊ စကတ်နှင့် T-shirt / WP20-015 တို့ကိုစစ်ဆေးသည်
ဆက်စပ်ပစ္စည်း: Snap ခလုတ်၊ သတ္တုဇစ်၊ Elastic မှတ်ချက်။ ။ နေရာချထားသည့်ပုံ၊ Patch ပန်းထိုး၊ Sequin ပန်းထိုးထားခြင်း။ ဤအပိုင်းအစမှာသားရေဂျာကင်အင်္ကျီပါ ၀ င်ပြီး၊ စကတ်နှင့်စတီရှပ်ပါရှိသည်။ ဆောင်း ဦး ရာသီသို့မဟုတ်နွေ ဦး ရာသီအတွက်အလွန်သင့်လျော်ပြီးဖက်ရှင်နှင့်အအေးဓာတ်ပြည့်ဝသည်။ အနက်ရောင်ဂျာကင်အင်္ကျီထည် handfeel သည်အလွန်ပျော့ပျောင်းသည်။ ၎င်းသည်ဖုန်မှုန့်များကိုခံနိုင်ရည်ရှိရုံသာမကဂရုစိုက်ရန်လည်းလွယ်ကူသည်။ ထို့အပြင်ကောင်းမွန်သောအရေးအကြောင်းများနှင့်ပုံသဏ္retာန်ကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ ကော်လာ Choo ...